वडा अध्यक्ष नै बैदेशिक रोजगारका लागि कोरियामा ! - Khabar Break | Khabar Break
तोलामा २४०० बढ्यो सुनको भाउ
मकवानपुरमा आज संक्रमण पुष्टि भएका ३७ जनाको विवरण
मकवानपुरमा आज ३७ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि (पुरै बिबरण सहित)
मकवानपुरमा आज ३७ जना कोरोना संक्रमित पुष्टि
वडा अध्यक्ष नै बैदेशिक रोजगारका लागि कोरियामा !
९ भदौ,खाँदबारी नगरपालिका –५ का वडा अध्यक्ष बमबहादुर घले बैदेशिक रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । स्थानिय तहको निर्वाचनमा जनताको सेवा गर्छु भनेर जनता सामु भोट मागेर खाँदबारी–५ बाट विजयी वडाअध्यक्ष बमबहादुर घले दक्षिण कोरिया पुगेको रहस्य खुलेको छ । गत साउन २४ गते बाट आफ्नो घरयासी कामको शिलसिलाका कारण नगर क्षेत्र बाहिर जानु पर्न भएकाले उपस्थित हुन नसक्ने पत्र मार्फत खाँदबारी नगरपालिका कार्यालयमा जानकारी दिएका छन् ।
वडा अध्यक्ष रोजगारका लागि कोरिया पुगेपछि स्थानियले उप–निर्वाचनको माग गर्दे खाँदबारी नगरपालिका कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । वडा अध्यक्ष घलेले सरकार संचालन ऐन २०७४ को उप दफा ४ को (ग) को (६) बमोजिम कार्यबाहक अध्यक्षको वडा सदस्य श्यामप्रसाद निरौलालाई दिइएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
वडा अध्यक्ष घले पहिलो पटक विजयी भएको ५ महिना नवित्दै व्यत्तिगत कारण देखाउँदै कोरिया पुगेर गत असार महिनामा आएर साउनको २४ उनले जिल्ला छाडेको बताइएको छ । वडा अध्यक्ष घले असारमा महिनामा हाजिर भएर दोस्रो पटक पुनः कोरिया पुगेका हुन् । २०७४ मंसिर २९ गतेको नगरकार्यपालिको बैठकदेखि अनुपस्थीत रहेको वडा अध्यक्ष घले गत असारमा हाजिर भएको खाँदबारी नगरपालिकाले जनाएको छ ।
वडा अध्यक्ष घलेले श्यामप्रसाद निरौला कार्यवाहक छाडेर व्यत्तिगत काममा गएको खाँदबारी नगरपालिकाका उप–प्रमुख डेगेश्वरी श्रेष्ठले जानकारी दिएकी छन् । २०७६ साउन २४ गते देखि निरौलाले पुनःकार्यबाहक वडा अध्यक्षको जिम्मा पाएका छन् । कानुनमा यो विषयम केही उल्लेख नभएको खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कोमल धमलाले बताए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धमलाले भने कानुनमा उप–निर्वाचन हुन राजिनामा वा मृत्यु भएको खण्डमा मात्र हुन सक्ने ब्यवस्था भएको बताए । यो विषयमा संघीय संसदले मात्र कानुन बनाउन सक्ने भएपनि अहिलेसम्म बनिसकेको अवस्था नभएको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
प्रहरीभित्र कोरोना फैलिँदै
६ सय ९४ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण
प्रत्येक घण्टामा १४ संक्रमित थपिँदै,कसरी जोगिने ?
भत्काएर भत्किएनन् छाउगोठ
क्वारेन्टाइनमै करेन्ट लागेर २३ वर्षकी महिलाको मृत्यु
जोखिममा रेस्टुराँ : ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी र ९० हजार जनशक्ती प्रभावित
बागमती प्रदेशमा थप १ सय ७० जनामा कोरोना संक्रमण,संक्रमितको संख्या २१६७ पुग्यो